DOWNLOAD ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA EPSON PERFECTION 2480 PHOTO - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2020
Ịkwọ ọkwọ ụgbọala maka Epson Perfection 2480 Photo
Mgbe ị na-ede ụdị okwu ọ bụla na MS Okwu, ọ na-adịkarị mkpa itinye ogologo okwu n'etiti okwu ọnụ, ọ bụghị naanị nkedo (hyphen). Na-ekwu maka nke a, onye ọ bụla maara ebe akara a dị na keyboard - nke a bụ nọmba ọnụọgụ kwesịrị ekwesị na ọnụọgụ nọmba. Nke a bụ iwu ndị doro anya na-etinye aka na akụkụ Akwụkwọ Nsọ (karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe omume, akwụkwọ nkịtị, nke dị mkpa), choro iji ihe odide mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị: a na-edekọ okwu ọnụ, otu okwu - na okwu ndị e dere ọnụ, ma ọ bụrụ na i nwere ike ịkpọ ya.
Tupu ị chọpụta otú ị ga-esi gbanye ogologo oge na Okwu, ọ bara uru igwa gị na e nwere ọtụtụ ụdị nkedo - kọmputa (nke dị mkpirikpi, nke a bụ akwa), ọkara na ogologo. Ọ bụ banyere nke ikpeazụ, anyị na-akọwa n'okpuru ebe a.
Mgbanwe nnọchi akpaaka
Okwu Microsoft na-eji ngwa ngwa dochie eriri ahụ na nkwụsịtụ n'ọnọdụ ụfọdụ. Otutu mgbe, enweghi ike, nke na-aga n'ihu, na mgbe edere ya, zuru ezu iji dee ederede nke oma.
Dịka ọmụmaatụ, ị pịnyere ihe ndị na-esonụ na ederede: "Ogologo oge". Ozugbo i tinyere oghere mgbe okwu ahụ na-esote ngwa ngwa (n'ọnọdụ anyị, okwu a "Nke a") a na-agbanwe okwu dị n'agbata okwu ndị a ruo ogologo oge. N'otu oge ahụ, ohere kwesịrị ịdị n'agbata okwu ahụ na akwa, n'akụkụ abụọ.
Ọ bụrụ na a na-eji hyphen mee ihe n'okwu (dịka ọmụmaatụ, "Onye"), enweghi oghere n'ihu na n'ihu ya, mgbe ahụ, n'ezie, ọ gaghị eji ogologo oge dochie ya.
Rịba ama: Ntughari, nke edebere na Okwu na ngbanwe, adighi anya (-), na nkezi (-). Nke a kwekọrọ na iwu ederede.
N'ọnọdụ ụfọdụ, yana ụfọdụ nsụgharị nke Okwu ahụ, ọ dịghị mgbanaka mwepụ akpaka maka ogologo oge. N'okwu a, ịnwere ike ịkwanye onwe gị, jiri ụfọdụ nọmba na ọnụọgụ ọkụ.
1. N'ebe ị chọrọ itinye ogologo oge, tinye nọmba “2014” enweghị nzacha.
2. Pịa nchịkọta isi "Alt X" (onye ọbụla ga-abụ ozugbo ọnụọgụgụ).
3. Nchikọta ọnụ ọgụgụ nke ị banyere ga-eji dochie anya ya.
Ntuziaka: Iji mee ka ntakịrị obere, tinye nọmba “2013” (nke a bụ ihe a na-eme ka ọkpụkpụ na-eme ka ọ bụrụ nkwonkwo, nke anyị dere banyere n'elu). Itinye eriri, ị nwere ike ịbanye “2012”. Mgbe ịbanye ọ bụla hex koodu dị nnọọ pịa "Alt X".
I nwekwara ike itinye ogologo oge na Okwu ahụ site na iji òké site na ịhọrọ àgwà kwesịrị ekwesị site na setịpụ nke usoro ihe omume ahụ.
1. Debe onye na-ede okwu na ederede ebe ogologo oge kwesịrị.
2. Gbanwee na taabụ "Tinye" ma pịa bọtịnụ ahụ "Ihe Atụ"dị n'otu otu.
3. Na ndepụta gbasaa, họrọ "Njirimara Ndị Ọzọ".
4. Na windo nke gosipụtara, chọpụta nkwụsị nke ogologo oge kwesịrị ekwesị.
Ntuziaka: Ka ị ghara ịchọ akara nke achọrọ maka ogologo oge, gaa na tab "Ihe odide pụrụ iche". Chọta ogologo dash n'ebe ahụ, pịa ya, wee pịa bọtịnụ ahụ. "Tapawa".
5. Egwuregwu dị ogologo na-egosi na ederede.
Njikọ kpo ọkụ
Ọ bụrụ na keyboard gị nwere ngọngọ nke igodo ọnụ ọgụgụ, enwere ike itinye ya na ya:
1. Gbanyụọ mode "NumLock"site na ịpị igodo kwekọrọ.
2. Debe onye na-akpọ cursor n'ebe ị chọrọ itinye ogologo oge.
3. Pịa igodo "Alt Ctrl" ma “-” na igodo igodo.
4. Ogologo oge na-egosi na ederede.
Ntuziaka: Iji tinye obere mkpirisi, pịa "Ctrl" ma “-”.
Ụzọ ikpeazụ nke ịgbakwunye ogologo oge iji ederede bụ ihe zuru ụwa ọnụ, a pụkwara iji ya na ọ bụghị naanị na Microsoft Okwu, kamakwa na ọtụtụ HTML editọ.
1. Tinye onye na-akpọ cursor n'ebe ịchọrọ ịtọọ ogologo oge.
2. Jide igodo. "Alt" ma tinye nọmba “0151” enweghị nzacha.
3. Wepu igodo. "Alt".
Nke a niile, ugbu a, ị maara kpọmkwem otu esi etinye ogologo oge na Okwu ahụ. Ọ bụ gị ka ị ga-ekpebi usoro ị ga - eji mee ihe maka nzube a. Isi ihe bụ na ọ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma. Anyị na-achọ ka ị dị elu na arụpụta ọrụ na naanị nsonaazụ dị mma.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ndị ọkwọ ụgbọala 2020